Manchester united oo andre Silva ku badalaneysa Edson Cavanni.
Home Suuqa kala iibsiga Manchester united oo andre Silva ku badalaneysa Edson Cavanni.
Man Utd ayaa u jeesan doonta andre Silva haddii Cavani uu kooxda baxo sida ay kusoo warameyso The Sun United ayaa qorshaheedu yahay in Cavanni ay kaliya heystaan indha ka dhiman xilli ciyaaredka kadibna iska fasaxaan.
Xiddiga reer Uruguay ayaa ka bixi kara xagaagan, isagoo wadada u baneeynay saxiixa Portugal Andre Silva oo man united lala xiriirinayo Wakiilka Silva, Jorge Mendes, wuxuu raadinayaa inuu u dhaqaaqo macmiilkiisa iyadoo Eintracht Frankfurt ay diyaarineyso iib si ay heshiis joogto ah ugu hesho Luka Jovic.
Man Utd ayaa laga yaabaa inay tahay hal koox oo suuqa ugu jirta Silva, madaama ay ku riixayaan inay la soo wareegaan weeraryahan hadii kooxda ay doorato inay fasaxaan Cavani xagaagan.
Previous articleMiyuu diyaar yahay thomas Partey kulanka habeen dambe Arteta ayaa ka hadlay.
Next articleNeil Lennon oo iska casilay shaqada kooxda Celtic kadib waqtiyo xun oo soo wajahay.